Fahasalamana : mifarana ny tetikasa USAID Mikolo | NewsMada
Fahasalamana : mifarana ny tetikasa USAID Mikolo
Nifantoka tamin’ny tontolon’ny fahasalamana ny tetikasa USAID mikolo tao anatin’ny dimy taona niasany. Betsaka ny tombony azo tsapain-tanana ary anisan’ny nisitraka betsaka izany ny reny sy ny zaza.
Fanamafisana ny tambajotran’ny fahasalamana eny ifotony, fanatsarana ny kalitaon’ny fitsaboana, ary fivoarana goavana eo amin’ny sehatry ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza. Anisan’ny zava-bitan’ny tetikasa USAID Mikolo mandritra ny dimy taona niasany teto Madagasikara ireo. Nofaranana tamin’ny fomba ofisialy tao Toliara ity tetikasa ity. Hatramin’ny taona 2013 ny USAID Mikolo no niara-niasa amin’ny fanjakana malagasy. Manamafy ny rafitry ny fahasalamana amin’ny fanomezana fitsaboana ara-kalitao ho an’ireo izay monina 5 km miala ny toeram-pitsaboana.
Amin’ny ankapobeny, nanampy tamin’ny fandrosoana ny tetikasa USAID Mikolo nandritra ny dimy taona. Anisan’izany ny fananganana rafitra ara-pahasalamana matanjaka sy maharitra, mamaly ny hetahetan’ny vahoaka malagasy.
“Manatsara ny fahasalamana sy ny hoavin’ny vahoaka malagasy ny USAID amin’ny alàlan’ny tetikasa mahomby toy ny Mikolo,” hoy Atoa Chris Milligan, tale jeneraly mpisolo toeran’ny USAID eto Madagasikara.
“Nahavita zavatra maro izahay tao anatin’izay dimy taona izay, saingy betsaka ny tokony mbola hatao. Hiara-miombon’antoka hatrany amin’ny fanamafisana ny rafi-pitsaboana eto Madagasikara ny USAID toy an’i USAID Mikolo, izany hoe mamela lova ho an’ny rafitry ny fahasalamana,” hoy izy.
Nihatsara ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza
Niakatra 150.557 ny isan’ny mpampiasa fandrindrana fiainam-pianakaviana tamin’ny taona 2018 raha 66.465 izany tamin’ny 2014.
130.250 ny zaza latsaky ny dimy taona voatsabo amin’ny aretim-pivalanana nampiasana SRO na iray sy valo, izay omen’ny mpanentana fahasalamana hofanin’ny USAID Mikolo.
302.158 ny ankizy latsaky ny dimy taona mararin’ny pnemonia nahazo fitsaboana sahaza.
Ny tahan’ny trangan’aretina tazomoka voamarina ka notsaboina tamin’ny fanafody Artemisinine na ACT, niakatra 93% tamin’ny taona 2018 raha 58% izany tamin’ny 2014. Mora kokoa ny fahazoana ACT ary nihena ny tsy fisian’ny fanafody, koa raha 20% izany tamin’ny 2014, 5% sisa tamin’ity taona ity.
Zaza miisa 2.787.746 no narahi-maso ny fitomboany nanomboka ny taona 2014 ka hatramin’izao fotoana izao. Vehivavy 118.664 no nalefan’ny mpanentana fahasalamana hisafo tao anatin’ny dimy taona lasa.